DTP & Translator [JOB]
Myanmar IT Resource Forum » ADVERTISEMENT ZONE » » Job Opportunity » DTP & Translator [JOB]
1 DTP & Translator [JOB] on 6th May 2010, 6:39 pm
စာရိုက်မြန်ဆန်မှန်ကန်သူနဲ့ တရုတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဘာသာပြန်နိုင်မယ့်သူတွေ အလိုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ လူလိုနေလို့ ရှာခိုင်းလိုက်လို့ပါ။ ယုဇနပလာဇာ အနီးမှာပါ။
2 Re: DTP & Translator [JOB] on 6th May 2010, 8:16 pm
Part time job အနေနဲ့ ရလား။
ပြီးတော့ နှစ်ခုစလုံး ကျွမ်းရမှာလား။
3 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 8:33 am
SilentHill wrote: စာရိုက်မြန်ဆန်မှန်ကန်သူနဲ့ တရုတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဘာသာပြန်နိုင်မယ့်သူတွေ အလိုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ လူလိုနေလို့ ရှာခိုင်းလိုက်လို့ပါ။ ယုဇနပလာဇာ အနီးမှာပါ။
တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်တော့ရိုက်ပေးလို့ရတယ်။ စာတစ်အုပ်ကို ဘယ်လောက်နဲ့ ဆိုပြီးအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲလုပ်ပေးမယ်။
English ဆိုရင် Typing Speed က 48 ရှိတယ်။ တစ်မိနစ်ကို အလုံးရေ 150 လောက်ထွက်တယ်။
မြန်မာစာဆိုရင်လဲရတယ်။ မြန်မာ Typing Speed တော့မကြည့်ဖူးဘူး။အခု ဒီပို့စ်ရေးတာ စက္ကန့် 25 ပဲကြာတယ်။ (ရေးတာနော်...တင်တာမပါဘူး )
4 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 8:37 am
Tag ကို JOB ဆိုပြီး တပ်ပေးပါခင်ဗျာ....
ကျွန်တော် အကြမ်းချထားတဲ့ Tag ထဲမှာ လိုနေတာတွေရှိမှာပါ... အဲဒီ့ထဲကဘဲ တပ်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူး...
5 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 9:02 am
မြန်မာ Typing Speed တော့မကြည့်ဖူးဘူး။အခု ဒီပို့စ်ရေးတာ စက္ကန့် 25 ပဲကြာတယ်။ (ရေးတာနော်...တင်တာမပါဘူး )
ကျနော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်တာ တစ်မိနစ်ကြာတယ်... အဲလောက်မမြန်ဘူးဗျ...
6 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 5:43 pm
ထက်နိုင် wrote: Part time job အနေနဲ့ ရလား။
Part time တော့ မပြောတတ်ဘူး။ မေးကြည့်ပေးမယ်။ အခုက Full time ပါ။ ၂ခုလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ စာရိုက်က သပ်သပ်၊ ဘာသာပြန်က သပ်သပ်ပါ။
7 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 5:48 pm
Full time ကိုခေါ်တာပါ။ ဒါနဲ့ စာတစ်အုပ်ကို ဘယ်လောက်နဲ့အပ်လို့ရလဲဟင်။ ဘယ်လိုယူလဲ စာမျက်နှာနဲ့လား။
ဒါနဲ့ အစ်ကိုက ကြားရက်မှာ ဘာအလုပ်လုပ်လဲ။ စပ်စုတယ်လို့မထင်နဲ့နော် ။ သိချင်လို့။
၂၅ စက္ကန့်ဆိုတော့ မြန်သားပဲ။ အရင်က ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာရိုက်တာ ပိုမြန်တယ်။ မြန်မာစာအရိုက်များသွားလို့ အင်္ဂလိပ်စာ နှေးသွားပြီ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 5:54 pm
ဘာသာပြန်ကို အဓိကလိုချင်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာသာပြန်တဲ့သူက နည်းနည်းပဲရှိနေလို့။
စာရိုက်လည်း လိုပါတယ်။ Second Priority ပေါ့။
9 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 7:28 pm
ဘာသာပြန်ကို PartTime (or) WorkingFromHome လုပ်လို့ရရင် ကိုထက်နိုင် တို့လို ကျောင်းသားတွေ အတွက် အစဉ်ပြေမှာပေါ့.
တရုတ်ခွေ ဘာသာပြန်ဆိုတော့ ၊ အပြင်မှာ ထွက်နေတဲ့ စာတန်းထိုးကားတွေထင်တယ်နော်.
အဲဒီ့အပြင်ကရောင်းတဲ့ခွေတွေရဲ့ မူရင်းဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ ဘာသာပြန်လိုနေတာကတော့ သိသာပါတယ်။ တော်တော်စုတ်ပြတ်နေတာဘဲ။ ပြန်ချင်တာတွေ ပြန်ထားကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေများဆို ဇာတ်လမ်းအရင်ကြည့်ပြီးမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ပြန်တာတောင် ပါတတ်သေး။ (ကို SilentHill ပိုင်တဲ့ အလုပ်လားမသိဘူး။ သွားပြောမိနေပြီ.. ဟီး.)
10 Re: DTP & Translator [JOB] on 7th May 2010, 9:54 pm
Ko HTet Naing.... I think he's the one who introduces me with this forum..
I wish I was Chinese expert. Miss one opportunity. Byel!!! [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: DTP & Translator [JOB] on 8th May 2010, 4:14 pm
Cherry May wrote: Ko HTet Naing.... I think he's the one who introduces me with this forum..
တရုတ်လိုတော့ရ၀ူး။ Typing တော့နည်းနည်းရတယ်။ z3roc00l လောက်တော့ မကျွမ်းဘူး။
12 Re: DTP & Translator [JOB] on 8th May 2010, 6:32 pm
SYKO wrote: ဘာသာပြန်ကို PartTime (or) WorkingFromHome လုပ်လို့ရရင် ကိုထက်နိုင် တို့လို ကျောင်းသားတွေ အတွက် အစဉ်ပြေမှာပေါ့.
မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က လခစားလေးပါခင်ဗျာ ။ [You must be registered and logged in to see this image.] အပြင်မှာထွက်တဲ့ စာတန်းထိုးကားတော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ MRTV ကလွှင့်တဲ့ စာတန်းထိုးကားတွေပါ။
အဲဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ချင်သား [You must be registered and logged in to see this image.] အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူနဲ့သိရင်လည်း ကျွန်တော့်ပြောနော် ဖက်စပ်လုပ်ချင်လို့ [You must be registered and logged in to see this image.]
Media ပိုင်းကိုလည်း အဲဒီရောက်မှ စိတ်ဝင်စားသွားတာ။ အရင်က ယောင် 60။ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဟုတ်တယ်ဗျ။ တချို့ကားတွေဆို ပြောတဲ့စကားက နောက်လူ သုံး လေး ယောက်လောက်ပြောပြီးမှ အဲဒီစာ ပေါ်လာတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရုပ်နဲ့စာ တွဲကြပေါ့နော် [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by SilentHill on 8th May 2010, 6:39 pm; edited 1 time in total
13 Re: DTP & Translator [JOB] on 8th May 2010, 7:36 pm
ဟဟ ၊ MRTV က လွှင့်တဲ့ဟာတွေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ မလွယ်လောက်ဘူးဗျ။
မြန်မာစာ အရေးအသား ညက်ညော ၊ ပြေပြစ်ရမယ့် အပြင် ၊ ကိုယ်ပြန်မယ့်ဘာသာ (တရုတ်) ကိုလည်း တော်တော်ကို ကျွမ်းမှဖြစ်မှာ။
ဘာလို့ဆို မြန်မာ့အသံ တို့ ၊ မြ၀တီ တို့ကလာတဲ့ ကိုရီးယားကား Quality နဲ့ အပြင်ကဟာတွေ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတည်းကိုဘဲ ကြည့်ရင်တောင် တော်တော်ကွာပါလိမ့်မယ်။ အပြင်ကနေ ဇာတ်ကားတစ်ခုကို မြန်မြန်ကြည့်ချင်လို့ ၀ယ်ကြည့်လိုက်ကြပေမယ့် ၊ မြန်မာ့အသံက မပြီးသေးလို့ ပြနေရင် ထပ်ကြည့်တာကို ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။ (အိမ်မှာ အဲလိုကြည့်နေကြလွန်းလို့။ )
အဲအလုပ်က လုပ်နိုင်ရင်တော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဗျ။ (ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဆိုရင်ပေါ့)
ကျွန်တော့်မှာတော့ အဲလိုအသိမရှိပေမယ့် ၊ ခွေခိုးကူးတဲ့ အသိတွေရှိတယ်။
14 Re: DTP & Translator [JOB] on 9th May 2010, 6:42 pm
SYKO wrote: ဟဟ ၊ MRTV က လွှင့်တဲ့ဟာတွေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ မလွယ်လောက်ဘူးဗျ။
အခုခေါ်တာက MRTV အတွက် မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ တခြားလိုင်းအတွက်ပါ။ ဘယ်လိုင်းအတွက်လည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူးခင်ဗျ။
အပြင်မှာထွက်နေတဲ့ စာတန်းထိုးခွေတွေအတွက် ဇာတ်လမ်းက ဘယ်ကရတာလဲ ။ Video File ကိုပြောတာပါ။
ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကားတွေကို တာဝန်ယူရောင်းပေးတဲ့ကုမ္ပဏီလိုမျိုး ဒီမှာရှိလား။
ကျွန်တော်တို့ဆီကို မြ၀တီကကားတွေ လာမအပ်ဘူးဗျ။ သူတို့ကသပ်သပ်။ မြန်မာ့အသံနဲ့ မြ၀တီက ဇာတ်လမ်းတွေကို ယှဉ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် မြ၀တီမကြည့်တာတော့ကြာပြီ။ အင်တင်နာ မကောင်းသေးလို့ [You must be registered and logged in to see this image.] ။ ကျွန်တော် မြ၀တီမှာပြတဲ့ ဂျူမုံခွေလေ၊ အဲဒါကိုပြန်ကြည့်ကြည့်တော့ နည်းနည်းကွာတယ်ဗျ။ $ƴǩǾ ကြည့်ကြည့်ပါလား။ ကြွားတာ [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: DTP & Translator [JOB] on 9th May 2010, 8:10 pm
အွန်။ MRTV အတွက်လည်း မဟုတ် ၊ မြ၀တီ ကလည်း လာမအပ်မှတော့ ကျန်တာ တစ်ခုဘဲရှိတယ်လေ ၊ Family Entertainment! ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် မသိတဲ့ တစ်လိုင်းဘဲ ထပ်ထွက်သေးတာလား။ lol
အပြင်မှာထွက်တဲ့ကားတွေက တဆင့်တဆင့်စီရောက်လာတာ ၊ တကယ့်ဖြန့်တဲ့ အကြီးဆုံးကတော့ နယ်စပ်က၀ယ်ကြရတာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ဘူး တခြား အကုန်လုံး အဲလိုလုပ်ကြတာဘဲလေ။ ဟုတ်ဝူးလား။
တကယ်ဖြန့်တဲ့ အကြီးဆုံးကြီးတွေတော့ ဒီမှာ၇ှိမှာပေါ့။ တာဝန်ယူရောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘဲ ၊ ဟိုနိုင်ငံမှာ ကူးခွေရရင် ကူးခွေပြန်ကူး ၊ အနည်းဆုံး အချပ် ၁၀၀၀ လောက် (အဲထက်တော့ များမှာသေချာတယ်) ကို ကူးပြီးတော့ မြို့ထဲကို ဖြန့်ကြမှာပေါ့။ Detail Process တော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူးဗျ။
ကျွန်တော် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မကြည့်ဘူးဗျ။ လူတွေကို ချော့သိပ်ထားတဲ့ ၊ ဘိန်းငွေ့မို့လို့။ (အနော်မပါဘူးနော်။ ပြေးပြီ။)
16 Re: DTP & Translator [JOB] on 10th May 2010, 9:30 am
အခုလက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ IT Executive ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က စာစီစာရိုက် ဆိုင်မှာလုပ်ဖူးလို့ပါ။ အခုအလုပ်က တစ်ပတ်ကို ၅ ရက်ဆင်းရတယ်လေ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ တော့ပိတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ စာမျက်နှာနဲ့ပဲယူပါတယ်။ အပ်မယ်သေချာရင်ဈေးကိုတော့ ညှိတာပေါ့။
17 Re: DTP & Translator [JOB] on 10th May 2010, 8:36 pm
ဈေးတည့်ရင် မုန့် ဝယ်ကျွေးနော်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
18 Re: DTP & Translator [JOB] on 11th May 2010, 6:08 pm
အထက်ကလူတွေ အတွက် ဘာသာပြန်တဲ့သူက ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ စာရိုက်တဲ့လူတွေ အရမ်းနှေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတလေ စာရိုက်ရိုက်ပေးရသေးတယ်။ စာရိုက်မြန်တဲ့လူတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲဗျို့။ ဒီမှာ ရေကြီးနေလို့။ [You must be registered and logged in to see this image.]
19 Re: DTP & Translator [JOB] on 11th May 2010, 6:14 pm
SYKO wrote: အွန်။ MRTV အတွက်လည်း မဟုတ် ၊ မြ၀တီ ကလည်း လာမအပ်မှတော့ ကျန်တာ တစ်ခုဘဲရှိတယ်လေ ၊ Family Entertainment! ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် မသိတဲ့ တစ်လိုင်းဘဲ ထပ်ထွက်သေးတာလား။ lol
ခွေတွေမှာ ထိုင်း၊ အင်္ဂလိပ်။ မလေးရှား အဲဒီလိုမျိုးစာတမ်းထိုးတဲ့ နိုင်ငံခြားကားတွေ အရင်ကတည်းက ရှိတယ်မလား။ ကျွန်တော်တွေ့မိတာက အဲဒီလိုမျိုး မြန်မာစာတမ်းနဲ့ခွေတွေ တွေ့မိတယ်။ အဲဒါများ ဖြစ်မိသလားလို့ [You must be registered and logged in to see this image.] ကျွန်တော့်အထင်ပြောတာ [You must be registered and logged in to see this image.]
20 Re: DTP & Translator [JOB] on 1st August 2010, 6:09 pm
21 Re: DTP & Translator [JOB]